वायुसेवा निगम यसरी तल गिर्नुमा मन्त्रालयकै चलखेल जिम्मेवार छ
प्रकाशित मिति: 2015/08/06
नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने
नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा कार्यरत रहिरहनुभएका शिवशरण न्यौपानेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको सिफारिसमा गत असार २१ को मन्त्री परिषद्को निर्णयले पदबाट हटाउने र त्यसको ठाउँमा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ रहने निर्णय गरेको गर्‍यो । सो निर्णय भएको पर्सिपल्ट अर्थात असार २३ गते आफुमाथी अन्याय भएको भन्दै न्यौपाने अदालत पुग्नुभयो । पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा आफ्नो पक्षमा अदालती निर्णय आएपछि बुधबारबाट उहाँ पुनः अध्यक्षमा बहाल हुनुभएको । अहिले उहाँ आफुले न्याय पाएको महसुस गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ यसैको सेरोफेरोमा रहेर सुवास भट्टले न्यौपानेसँग गरेको संवादः
नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, विचमा बर्खास्तीमा पर्नुभयो, अहिले पुनः बहाली हुनुभएको खास कुरा के थियो ?
यसमा चलखेलको कुरा छ, यसलाई राजनीतिक भन्नुस वा माफियाको । म मन्त्रिपरिषदबाटै तिनवर्षका लागि तोकेरै आएको अध्यक्ष हो । बिचमा यो गर्‍यो, त्यो गर्‍यो भन्ने कुरा आयो, यसमा म कार्यकारी होईन सेरेमोनियल हो । बोर्ड सञ्चालन गर्ने, बोर्ड बैठक बोलाउने र व्यवस्थापनले पठाएको प्रस्तावलाई त्यसको महत्व बुझेर छलफलको क्रममा राख्ने हो । सोहिअनुरुप काम भइराखेको थियो । अचानक अवकासको पत्र आयो । मलाई अन्याय भयो । तीनवर्षका लागि मलाई नियुक्ति गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बर्खिलाप भयो । यसपछि म न्यायका लागि अदालत गएँ । एक वर्ष नपुग्दै अन्यायपूर्वक मलाई अवकासका लागि पत्र आएको थियो । त्यहाँ अन्याय भएको थियो ।
मेरा आफ्नै भूमिका छन्, तिबाहेक अरुमा मेरो सही चल्दैन । आम्दानी खर्च लगायत सबै आर्थिक मामिलामा महाप्रवन्धक मुख्य हो । अध्यक्षले सुझावको रुपमा आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्न सक्छ र बोर्ड बैठक ‘स्मुथली’ सञ्चालन गरेर व्यवस्थापनलाई सहयोगमात्र गर्न सक्छ । अब समिति किन बनायो भन्ने कुरा कम्पनीको आवश्यकता हेरेर गर्ने कुरा हो । यसमा किन बनायो दुई हजार रुपैयाँ किन खायो भनेर कुरा गर्ने होइन नी ! कति वाहियात कुरा छ ! यहाँ करोडौँ घोटाला भएको कुराचाँहि ननिकाल्ने अनि अध्यक्षले बैठक भक्ता खायो भन्ने कुरा निकाल्ने ? यी अनियमितताका कुराहरु पनि निकाल्नुपर्‍यो सुरेशमानजीले । उहाँ जस्तो सचिव तहको मान्छेले यस्ता वहियात कुरा गर्न मिल्दैन ।
हावा नचलि पात त हल्लेन होला नि !
प्रश्नका लागि धन्यवाद । जहाँसम्म तपाइँले इंकित गर्नुभएको अनियमितताको सवाल छ, हाम्रो समिति हुन्छ, उपसमिति हुन्छ । जुनसुकै निर्णय पनि म एक्लैले गर्न मिल्दैन, बोर्डले गर्छ । समितिले यो काम गर्नुपर्‍यो, अध्यक्षले यो काम गर्नुपर्‍यो भनेपछि मात्र निर्णय गर्ने हो । म नागरिक उडड्ययनमा तिन दशकभन्दा लामो समय काम गरेँ । प्राविधिकमा पाईलट र इन्जिनियरिङमा मेरो राम्रो ज्ञान छ । यो हिसावले यो क्षेत्रमा समितिमा बसेर हेर्दा सुरेशमानजीलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण के ? एयरलाईन्स माथि जान्छ भनेर उहाँ डराउनुभएको हो भने यसलाई डुबाईदिए भैहाल्यो, ताला मारिदिए भैहाल्यो । मलाईमात्र छिर्न नदिने होईन की सबै कर्मचारीलाई छिर्न नदिने र यसलाई धरासायी बनाउने, बेच्ने, खाने धन्दामा लागे भैहाल्यो । सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले मलाई एयरलाइन्समा छिर्न नदिएर सर्वोच्चको आदेशको बर्खीलाप गर्नुभएको छ । विभिन्न बहानाबाजी बनाएर मलाई निकाल्ने चेष्टा गर्नुभएको छ हेरौँ न त ति योजना कसरी सफल हुँदारहेछन् ! सर्वोच्चको फैसला विपरित कसरी अगाडी बढनुहुन्छ भने हेरौँ न त उहाँको ताकत ! वरिष्ट वकिलहरुले वहस गरेको मुद्दा हो यो । अहिले सर्वोच्च अदालतले मलाई न्याय दिएको छ । म अन्यायमा परेको मान्छेलाई सर्वोच्चले न्याय दिएको छ, यसमा कसैले रिसइवी गर्नुपर्दैन । अर्को कुरा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय तपाइँ हामीले मान्नु पर्छ कि पर्दैन, कानुनी राज्यमा ? कानुनी राज्य चाहिएन भने अदालतमा पनि ताला मारे भैहाल्यो नि !
मन्त्रिपरिषदले तीन वर्षका लागि भनेर निर्णय गरेर नियुक्ति गरेको हो, धेरै वर्षका लागि पनि होइन । यसरी एउटा निश्चिन प्रक्रिया पूरा गरेर आएकोलाई विचमा चलाउन नपर्ने थियो, तिनवर्ष काम गर्न दिएर के हुन्थ्यो ? म दम्भ गर्न सक्छु, म जस्तो प्राविधिक रुपले फिट मान्छे यहाँ आएन । ३२ वर्ष नागरिक उडड्यनमा काम गरेर विज्ञता हासिल गरेको नाताले मजस्तो उपयुक्त पात्र यो संस्थाले अहिलेसम्म पाएकै छैन् । अहिले पनि महाप्रवन्धकले इन्जिनियरिङ र अपरेसनका लागि सुझावका लागि आग्रह गर्नुभएको, यो सबैले बुझ्दैन । यसका लागि पढाई, अनुभव सबै कुरा चाहियो । तसर्थ यसरी अनुचित रुपमा विचमा अवकास दिने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । तोकिएको समयावधिमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।
वायुसेवा निगम अगाडी बढन नसक्नुमा के–के पक्ष जिम्मेवार छन् त ?
वायुसेवा निगम यसरी तल गिर्नुमा मन्त्रालयकै चलखेल जिम्मेवार छ, यो अहिले आएर थप प्रश्ट भएको छ ।
तपाइँले संकेत गर्नुभएको चलखेल कस्तो चलखेल हो ?
राजनीतिक रुपमा कहिले महाप्रवन्धकलाई चलाउने कहिले अध्यक्षलाई चलाउने, मुद्दामा पठाउन बाध्य बनाउने जस्ता चलखेल धेरै पहिलेदेखि भएका हुन् । यस्ता ‘गेम’ गर्नुभएन, मन्त्रालयले ।
पर्यटन मन्त्रालयबाटै यस्ता ‘गेम’ खेलिन्छन ?
हो, सरकारी स्तरबाटै यस्ता गेम खेलिन्छन् । कतै कुनै हवाई माफियासँग लागेर गेम भएका छन् । यस्ता गेमहरु पक्कै भएका छन् ।
तपाइँ बर्खास्तिमा पर्नुमा कस्ले गेम खेलेको बुझ्नु भएको छ ?
यो गेममा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई मोहरा बनाईएको छ । योभन्दा माथी माफिया नै लागेका छन् ।
माफिया को ?
यसमा त मन्त्रिीको सही चाहिन्छ । चलखेल त पहिले पनि थियो पछिल्लो समय बढेको निश्चय नै हो ।
वायुसेवा निगम अगाडी बढनका लागि बाटो थुनिएको कक्तिको महसुस गर्नुभएको छ ?
पक्कै थुनिएको छ । जस्तो कि अहिले बोर्ड बस्न सकिरहेको छैन् । म बर्खास्तीमा परेँ, सचिवजीलाई अध्यक्ष बनाइयो, बोर्ड पनि बस्न सकेन । यस्तो लथालिङ्गमा परेपछि बाटो त थुनिने नै भयो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आम गुनासो आउने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा निगम कसरी अगाडी बढछ ?
यस्तो अवस्थामा निगमलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिनुप¥यो । यहाँ चाकडीतन्त्र चल्छ । जस्तो म चाकडी गर्न जान्न । कुनै एउटा निर्णय गर्न मन्त्री/सचिवकोमा धाएर म निर्णय गर्दिन, आफ्नो क्षमताले काम गर्छु । यसैकारण मलाई अवकासमा पठाईयो । निगम स्वतन्त्र छैन्, यो अवरोध हो ।
नेपाल वायुसेवा निगममा समस्या नीतिगत कि प्रवृतिगत ?
दुइवटै समस्या छ । यहाँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु भएन । प्रवन्धक र अध्यक्षको सल्लाहबाट अगाडी बढनुपर्छ । नीतिगत रुपमा यो गर उ गर भनेर अह्राउने होईन, यहाँ नियम, कानुन छ, अडिट हुन्छ । पैसा खायो भन्नलाई यहाँ बेरुजु आउनुपर्‍यो । नीतिगत रुपमा तलव भक्ता खानेमाथी हस्तक्षेप गर्ने होइन । प्रशासनिक कमजोरीलाई मैले सुधार्न खोजेँ । महाप्रवन्धकमार्फत सुझाव दिएर यसलाई अगाडी बढाऔँ, राष्ट्रिय ध्वजावाहक राष्ट्रको गौरव भएको संस्थालाई बचाऔँ भन्ने मेरो मनसाय हो । यसलाई साथ नदिनु भनेको धरासायी नै बनाउनु हो ।
वायुसेवा निगममा अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुभएको विगतको ११ महिनामा के गर्नुभयो संस्थालाई अगाडी बढाउन ?
के गरिन भन्नुस ! पाईलट कम भयो भनेर ‘कम्प्लेन’ आयो । मैले यहाँबाट रिटायर्ड भैसकेका, बाहिर रहेकाहरु सबैलाई सम्पर्कमा राखेको छु । विभिन्न ढंगबाट अभावलाई परिपूर्ति गरिरहेको छु । यो ठूलो काम हो, यो काम मैले गरेको हो । एयरबसको पाइलटका लागि पनि बाहिरबाट पढेर आएका कोही नेपाली नागरिकलाई लिनुपर्छ भन्दा किन हिच्किचाउनुपर्ने ? उनिहरुले खर्च गरेका छन् निगमको त खर्च भएको छैन नि ! तिनिहरु राष्ट्रघातक हुन् । लाखौँ खर्च गरेर पढेर आउने नेपाली नागरिकलाई सडकमा फाल्ने अनि पाईलट भएन भनेर कराउन पाईन्छ ? विभिन्न अनुचित यस्ता कामहरुलाई रोक्ने प्रयास गरेँ मैले । त्यस्तै म आएपछि र एयरबस ल्याउँदा मुम्बई, बैँङलोर, गोञ्जाओ स्टेसन खोल्नुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाएपछि यी कामहरु भएका हुन्, यी काम मैले गरेको हो । मैले के भनेको छु भने जापान र अमेरिका पुग्ने एयरबस जो आउँछ, त्यो जापान टच गरेर अमेरिकासम्म जान्छ । किनकी युरोपमा हामीले केहि ‘लिष्टेट रिक्वाइरीमेन्ट’ पूरा गरेका छैनौँ । उनिहरुले ब्ल्याकलिष्टमा राखेको होईन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सर्त राखेको हो, यो बुझ्ने भाषामात्र हो । यो काम नागरिक उडड्यनको हो, मसँग सुझाव माग्यो भने म दिन्छु । यसमा मेरो ज्ञान छ ।
उसो भए तपाइँमाथी किन यत्तिको झमेला आएको छ त ?
यहाँ आएर मैले के गरेँ भनेर सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ । म आएपछि बोर्डको कुनै काम रोकिएको छैन । प्रशासनलाई सहज भएको छ । बोर्डले नै काम रोकेर प्रशासनलाई अवरोध भयो भने पो त अध्यक्ष दोषी हुन्छ । जव प्रशासनलाई थप सहज भएको छ भने त अध्यक्ष सफल भयो नि ! कतै जहाज रोकियो भने म जान्छु अनि समाधान हुन्छ किनकी उनिहरुले नियम मान्नुपर्छ, भएन भने पाइलटलाई के गर्नुपर्छ मैले उपाय जानेको छु ।
यसको माने तपाइँ सक्षम हुनुहुन्छ, तपाइँलाई बर्खास्त गर्न पाए अनियमितता गर्नका लािग बाटो खुल्छ भन्ने नियत उनिहरुमा देखिएको हो ?
निश्चय नै !(जोड दिएर) । तपाइँले निर्धक्कसँग लेखिदिए हुन्छ ।
नेवानीलाई अगाडी बढाउने रणनीतिक कार्यनीतिक योजना के छ ?
तपाइँले मेरो कामलाई मान्ने हो नकी मेरो अनुहार । विदेशीहरुले के भनेका छन् भने – तँ अध्यक्ष भएर नियन्त्रण जहाज खरिदका लागि हामी नै व्यवस्था गर्छौँ भनेका छन् । यसका लागि कुनै टाउको दुखाईको विषय नै भएन । हामी पीपीपी (पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप)मा जान सक्छौँ । यो गरियो भने, जस्तो नेपालसँग पैसाको अभाव छैन्, अर्बौँ रुपैयाँ आउँछ, तपाइँ जहाज किन्नुस, व्यवसाय गर्नुस घाटा लाग्ने काम नगर्नुस । मेरो भनाई यहि हो यो राष्ट्र भनेको तपाइँ, मेरो मात्र होईन पछिल्लो पुस्ता छोरा नातीसम्मको हो । तपाइँले घुस खान सक्नुहुन्न, घस खाएपछि राष्ट्र सकिन्छ, यही कुरा सोच्ने मान्छे हो म । आजमात्र होईन आजभन्दा ३०/४० वर्षअगाडी पनि मन्त्रीहरुलाई यो कुरा भनेको छु, मैले । तपाइँले निर्णय गर्दा दीर्घकालिन हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे ममात्र हुँ । तर, यो कुरा अहिलेको स्थितिमा मिल्दैन ।
म काठमाडौँ गोन्जाओलगायतमा चलाउँछु, यो निकट भविश्यमा नै व्यवस्था गरिहाल्छु । अर्को कुरा काठमाडौँ टोकियो, नायगा, क्युवारिका भन्ने नयाँ एयरपोर्ट खोलेको छ । काठमाडौँ, क्युवारिका, जापान अनि न्युर्याक जान्छ । अहिले न्युयोर्कमा यति धेरै नेपाली रहेछ कि हप्ताको तिनवटा उडान राख्दा पनि मारामार हुन्छ, यो डाटा आइसकेको छ । यसका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो खालको काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गरेर अगाडी बढाउनुको सट्टा खुट्टा तानीतानी कमिटिको दुई हजार रुपैयाँ खाईस भन्न लाज लाग्दैन तिनिहरुलाई । अर्बौखर्बौ घोटाला भएको चाँहि तिनीहरुलाई मतलव छैन् । कमिटीमा त कामै गर्नुपर्छ होईन भने यहिँका कर्मचारीले गेटमा छिर्न दिँदैन, अहिलेको कर्मचारी सोझो छैन् । काम नगरीकन खायो भनेर कसैले कुरो उठाउन मिल्छ । अध्यक्ष भएको नाताले पनि विभिन्न उप–समितिमा आवद्ध हुनुपर्छ तर पनि म सबैमा छैन, एकदुईवटा प्राविधिक समितिमा छु । मसँग सम्बन्धितमा मात्र म आवद्ध छु, आर्थिकलगायत अन्यमा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनुहुन्छ । मलाई शान्तसँग काम गर्न दिनुपर्छ, दुईवर्ष पछाडी परिणा हेर्नुस परिणाम कहाँ पुग्छ ! दुईवर्ष पछाडी यसले युरोप अमेरिका छौएन भने मलाई भन्नुहोला । म बोलिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछु, सो क्षमता पनि राख्छु । उहि राष्ट्रघाती नै छ भने बेग्लै कुरा । जहाज ल्याउँ मिलेर कमिसन खाउँ भन्नेसँग मेरो रयाङ्किन मिल्दैन । कुरा सफा छ । जहाज आउनुपर्‍यो कम्पनी नियमित चल्नु पर्‍यो । मैले कर्मचारीहरुलाई पनि भनेको छु, राम्रोसँग काम गर्नुस कम्पनीलाई फाइदा गराउनुस, सोअनुरुप फाईदा लिनुस, यसमा मेरो हस्तक्षेप हुनेछैन ।